Dynastat - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Dynastat
Generic Name: Dynastat Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Dynastat ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Dynastat®ကိုရုတ်တရက်ဆိုးရွားလာတတ်တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းနဲ့ ခွဲစိတ်ပြီးနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကိုခဏတာကုသရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။ ခံတွင်းခွဲစိတ်ခြင်း၊ သားအိမ်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ဒူးဆစ်အစားထိုးခြင်း၊ ပေါင်ရိုးဆစ် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်အတွင်း မှန်ပြောင်းဖြင့် သည်းခြွေပွန်ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ အူကျရောဂါခွဲစိတ်ခြင်း၊ ရေဂါရှာဖွေရန် မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း၊ အစာအိမ်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ အူအတက်ပေါက်၍ခွဲစိတ်ခြင်း၊ သိုင်းရွိုက်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ဘေလုံးခွဲစိတ်ခြင်းစတဲ့ခွဲစိတ်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Dynastat®ထိုးဆေးကို ဆရာဝန်ကနေ ဆေးပမာဏတွက်ချက်ပြီးဆေးရုံမှာပဲ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ထိုးသင့်ပါတယ်။ ဆေးမထိုးခင်မှာပျော်ရည်နဲ့ ဖျော်ရပါတယ်။ ဒီဆေးကိုမသုံးခင်မှာဆေးညွှန်းစာမှ အချက်အလက်အားလုံးကိုဖတ်ပါ။
အညွှန်းစာမှာ ပါဝင်တဲ့အချက်တွေမှာ မရှင်းတာရှိရင် ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းပါ။
Dynastat®ကိုအခန်းအပူချိန်မှာတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့အောင်၊ စိုစွတ်မှု မရှိအောင် သိမ်းဆည်းတာဟာအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းခြင်းမဖြစ်ရအောင် ရေချိုးခန်းတွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရပါ။ Dynastat®ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းခြင်းမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Dynastat®ကိုအိမ်သာတွင်းထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့ရင်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားရင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Dynastat အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Dynastat®တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Dynastat ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Dynastat®ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်သင့်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Dynastat ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ လေပွခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Dynastat နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Dynastat®ဟာသင်ယခုသောက်သုံးနေတဲ့ တခြားဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်းလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် (သို့်) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။ အောက်ပါဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
Fluconazole နှင့် Ketoconazole
ACE Inhibitors, Angiotensin II Antagonists, Beta-Blockers၊ ဆီးဆေးများစသည့် သွေးကျဆေးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Dynastat နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Dynastat®ဟာအစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Dynastat နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Dynastat®ဟာသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာရောဂါများရှိနေရင် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Dynastat ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ထောက်ခံမှုပြုထားတဲ့ ကနဦးပမာဏကတော့ ၄၀မီလီဂရမ်ကို အကြောဆေး (သို့) အသားဆေးအနေနဲ့ ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ၆-၁၂ နာရီကြာတိုင်း ၂၀ (သို့) ၄၀မီလီဂရမ်ကို လိုအပ်သလိုပေးနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးတနေ့ကို ၈၀မီလီဂရမ်ထိ ပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးပြန်ကြောထဲကိုတိုက်ရိုက်ထိုးနိုင်သလိုပုလင်းကြီးချိတ်ထားတဲ့ လိုင်းထဲကိုလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားဆေးထိုးမယ်ဆိုရင် ကြွက်သားအောက်ပိုင်းခပ်နက်နက်ထိုးရပြီး ဖြည်းဖြည်းထိုးရပါတယ်။
ထောက်ခံမှုပြုထားတဲ့ ပမာဏကတော့ ၄၀မီလီဂရမ် ဖြစ်ပြီးအကြောဆေး (သို့)အသားဆေးအနေနဲ့ ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကြောဆေးကိုပိုအသုံးများပါတယ်။ ခွဲစိတ်ခြင်းမတိုင်မီ နာရီဝက်-၄၅မိနစ်ခန့် ကြိုပေးရပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Dynastat ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေမှာသုံးစွဲရမယ့် ပမာဏကိုမသတ်မှတ်ထားသေးပါဘူး။ ကလေးတွေအတွက် စိတ်မချရပါဘူး။ ဆေးဝါးတခုကို မသုံးခင်မှာဘေးကင်းမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပိုသိရအောငိ ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Dynastat®ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများ၊အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်
Dynastat®ဆေးကိုသုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးစွဲပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ကြိမ် သုံးစွဲရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်လွတ်သွားတဲ့ အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာသာသုံးစွဲပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသုံးစွဲခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 20, 2019
Dynastat® (parecoxib). http://www.news-medical.net/drugs/Dynastat.aspx. Accessed May 4, 2017.
Dynastat® (parecoxib). http://www.medindia.net/doctors/drug_information/parecoxib.html. Accessed May 4, 2017.
Dynastat® (parecoxib). http://www.ndrugs.com/?s=Dynastat. Accessed May 4, 2017.
ဆင်တုပ်ကွေးက ချန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အဆစ်နာ ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်မလဲ
လည်ပင်းတစ်ခြမ်း ညောင်းကိုက်နေတာ ဘယ်လိုကုသမလဲ